LOTAYA BULLETIN BOARD - SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS
လိုတရ မေးကြမယ် ဖြေကြမယ် (အမေးအဖြေ ဝန်ဆောင်မှု) သီးခြား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုသော သူသည် ဤသီးခြား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ နှင့် MPT ၏ အထွေထွေစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများကို ဖတ်ရှုပြီး အပြည့်အဝ နားလည်ကြောင်းနှင့် သူ/သူမအား ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအားလုံးက စည်းနှောင်မှုရှိကြောင်း အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
၁.၁. ဤသီးခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (ဤသီးခြားစည်းမျဉ်း) ကို MPT ၏ အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (အထွေထွေစည်းမျဉ်းများ) နှင့် ပူးတွဲဖတ်ရှုရန်နှင့် ယင်းကို ဤသီးခြားစည်းမျဉ်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် မှတ်ယူရမည်။
၁.၂. အကယ်၍ ဤသီးခြားစည်းမျဉ်းများနှင့် အထွေထွေစည်းမျဉ်းများအကြား ကွဲလွဲချက်များရှိခဲ့လျှင် ဤသီးခြား စည်းမျဉ်းများကိုသာလျှင် ထိုရှေ့နောက်မညီသော အတိုင်းအတာအထိ အစားထိုး လိုက်နာရမည်။
၁.၃. အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များမှလွဲ၍ ဤနေရာတွင် ပါဝင်သည့် စာလုံးအမည်းဖြင့် ဖော်ပြထားသော စကားရပ်များ သည် အထွေထွေစည်းမျဉ်းများတွင် သတ်မှတ်ထားသည့် အတိုင်း အဓိပ္ပါယ် သက်ရောက်စေ ရမည်:
“လိုတရ” ဆိုသည်မှာ- လိုတရ ဟု အမည်ပေးထားသော MPT မိုဘိုင်းအသုံးပြုမှု ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတွင် MPT အသုံးပြုသူများအတွက် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းအရာများကို ရရှိစေရန် ပြုလုပ်ထားပါသည်။
“နာမည်ပြောင်” ဆိုသည်မှာ သီးသန့်အမည်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အသုံးပြုသူတစ်ဦးစီက မိမိကိုယ်ပိုင် အသုံးပြုရန်နှင့် ထိုအမည်ဖြင့် မိမိအားခွဲခြားသိနိုင်ရန် ဖန်တီးထားသော အမည် ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ တင်ပြခြင်းများ သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများကို သူ/သူမ၏ နာမည်ပြောင်ဖြင့် ပြုနိုင်ပြီး၊ ယင်းတို့ကို သူ/သူမ၏ တင်ပြချက်များ သိုမဟုတ် ဖော်ပြချက် မှတ်တမ်းအဖြစ် စုစည်းထားနိုင်သည်။
”ဝန်ဆောင်မှု”ဆိုသည်မှာ လိုတရ Application မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ပြီး၊ အွန်လိုင်းမှ လိုတရ မေးကြမယ် ဖြေကြမယ် (အမေးအဖြေ ဝန်ဆောင်မှု) ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများကို မေးခွန်းများတင်ပြခြင်း သို့မဟုတ် အများသိစေရန်ဖော်ပြခြင်းပြုရန် ခွင့်ပြုထားပြီး၊ ယင်းကို အခြားအသုံးပြုသူ များက ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်/ သို့မဟုတ် ဖြေဆိုခြင်း ပြုနိုင်ပါသည်။
“အသုံးပြုသူ” ဆိုသည်မှာ လိုတရ မိုဘိုင်း Application မှတဆင့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်သည့် MPT အသုံးပြုသူ တစ်ဦးစီကို ဆိုလိုပါသည်။
“အသုံးပြုသူ၏အကြောင်းအရာ” ဆိုသည်မှာ- ဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် အသုံးပြုသူက အများပြည်သူသိရှိစေရန် ပြုလုပ်ထားသော တင်ပြချက်များ၊ ဖော်ပြခြင်းများ၊ လွှင့်တင်ခြင်းများ သို့မဟုတ် အခြားနည်း ပြုလုပ်ခြင်းများတွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
“MPT” ဆိုသည်မှာ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
၂။ ဝန်ဆောင်မှု ဖော်ပြချက်
၂-၁။ ဝန်ဆောင်မှုကို လိုတရ မိုဘိုင်း Application မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ အသုံးပြုသူအား ယင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင် တင်ပြခြင်း၊ အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဖော်ပြခြင်းများ သို့မဟုတ် လွှင့်တင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားပြီး၊ ၎င်းသည် အခြားအသုံးပြုသူများသို့ တင်ပြသော မေးခွန်းပုံစံဖြင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ တင်ပြချက်များ၊ အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဖော်ပြခြင်းများ သို့မဟုတ် လွှင့်တင်ခြင်းများ အားလုံးကို ဝန်ဆောင်မှုကို ချဉ်းကပ်လာသောလူတိုင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
၂-၃။ တင်ပြချက်အားလုံးကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စိစစ်ခြင်းခံရမည်။
အသုံးပြုသူတစ်ဦးချင်းစီသည် ၎င်းဝင်ရောက်အသုံးပြုသည့် သို့မဟုတ် အခြားသူများအတွက် တင်ပြဖော်ပြ ထားသော အကြောင်းအရာများ အားလုံးအတွက် ကိုယ်တိုင်တာဝန်ရှိသည်။ MPT သည် ဤဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသော အချက်အလက်များ၏ သဘောသဘာဝ သို့မဟုတ် ယင်းတွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်း အရာများ၊ ထိုအချက်အလက်များထဲသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုခြင်းအတွက် အပြုအမူ၊ မူပိုင်ခွင့် ချိုးဖောက်ခြင်း၊ လုံခြုံမှုချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ် (viruses) ၊ ကွန်ပျူတာ စနစ်သို့ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီး ပြန့်ပွားတတ်သည့် ကွန်ပျူတာ ဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစား (worms) နှင့် ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့် လုံခြုံမှုအားအား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးသည့် Trojan Horses အမည်ရ ဗိုင်းရပ်စ် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာ အချက်အလက်များ ခိုးယူခြင်း သို့မဟုတ် ဖျက်စီးခြင်း ဖြစ်စေသော စာ၊ ဂဏန်း သို့မဟုတ် သင်္ကေတများ ပြန့်ပွားခြင်း (malicious code) အပါအဝင် ယင်းတို့ချည်းသာမက - စသည်တို့မှ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင် သော ရလဒ် သို့မဟုတ် နစ်နာမှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုအတွက် မည်သည့်တာဝန်မျှ မရှိစေရ။
အချက်အလက်တင်ပြ အသုံးပြုသူသည် သိရှိနားလည်ထားရမည်မှာ- ယင်း အကြောင်းအရာကို အများပြည်သူ သိရှိစေရန် ဖော်ပြခြင်းအားဖြင့် သူ/သူမ၏ နာမည်ပြောင်နှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်အတူ ထိုတင်ပြ ထားသော အကြောင်းအရာကို လူတိုင်းက ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုခြင်း အသုံးပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရှိထားရပေမည်။ ယင်းအကြောင်းအရာများကို သုံးစွဲသူ၏ မှတ်တမ်း သို့မဟုတ် မော်ကွန်းအဖြစ် အချိန်ကာလ တစ်ခုအထိ MPTက ပြသ သို့မဟုတ် ထိမ်းသိမ်းပေးထားမည်ဖြစ်သည်။ တင်ပြအသုံးပြုသူသည် နောက်ထပ် နားလည်သိရှိရမည်မှာ- အထွေထွေစည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် ဤသီးခြား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်မှုများပါဝင်သော တင်ပြချက်၊ အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဖော်ပြခြင်းများ၊ လွှင့်တင်ခြင်းများအတွက် ထိုက်သင့်သော အရေးယူမှုခံရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းတွင် ပြစ်မှုမြောက်သော တင်ပြ ချက်များ၊ အများပြည်သူ သိရှိစေရန် ဖော်ပြခြင်းများ၊ လွှင့်တင်ခြင်းများကို ဖယ်ရှားပစ်ခြင်းသာမက ဝန်ဆောင်မှု ကို အသုံးပြုခြင်းမှ ယာယီ သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းတားမြစ်ခြင်းနှင့် ဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းများလည်း ပါဝင်မည် ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူသည် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီသောနည်းလမ်းအတိုင်းသာလျှင် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန် တာဝန်ယူရမည်။ အသုံးပြုသူသည် ဥပဒေနှင့်မညီသော မည်သည့် အကြောင်းအရာမဆို ပါရှိသည့် တင်ပြ ချက်များ၊ အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဖော်ပြခြင်းများ၊ လွှင့်တင်ခြင်းများကို မပြုလုပ်ရ။ ဥပဒေနှင့်မညီသော အကြောင်းအရာဟု ဆိုရာတွင် အသရေဖျက်သော အချက်အလက်များ၊ လျို့ဝှက်သတင်းများ သို့မဟုတ် အသိဥာဏ်ပစ္စည်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်သော အကြောင်းအရာများ စသည့် တို့ကို တင်ပြချက်များ၊ အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဖော်ပြခြင်းများ၊ လွှင့်တင်ခြင်းများကို ပြုရန် အသုံးပြုသူတွင် မည်သည့် တရားဝင် အခွင့်အရေးမျှမရှိသော အကြောင်းအရာများ (သို့သော် အကန့်အသတ်မရှိ) အားလုံး ပါဝင်ပါသည်။
၃.၃. မလျော်မကန် အသုံးပြုခြင်း
အသုံးပြုသူသည် မှားယွင်းသော ခြိမ်းခြောက်သော၊ အလွဲသုံးသော၊ အသရေပျက်အောင် ပုတ်ခတ်ပြောဆို သော သို့မဟုတ် အနှောက်အယှက်ဒုက္ခပေးခြင်းဟု ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သော မည်သည့် အပြုအမူမဆို ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာကို တင်ပြခြင်းများ၊ အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဖော်ပြခြင်းများ၊ လွှင့်တင်ခြင်းများကို မပြုရ။ အသုံးပြုသူသည် အခါခပ်သိမ်း လိမ်လည်လှည့်ဖျားသော အထင်မြင်မှားစေသော ပုတ်ခတ်ထိပါးသော အပြုအမူကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
အသုံးပြုသူသည် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို ကြော်ငြာခြင်း သို့မဟုတ် ဈေးကွက်ရှာခြင်း အပါအဝင် (ယင်းတို့ ချည်းသာမက) ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ စီးပွားဖြစ် ဆက်သွယ်ရေးများအတွက် ဤဝန်ဆောင်မှုကို အသုံး မပြုရ။
၃.၅. ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှု
အသုံးပြုသူ၏အကြောင်းအရာ ကိုတင်ပြခြင်း၊ အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဖော်ပြခြင်း၊ လွှင့်တင်ခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် အသုံးပြုသူသည် MPT အား အသုံးပြုသူ၏အကြောင်းအရာကို ဝန်ဆောင်မှုသို့မဟုတ် အရောင်းမြှင့်တင်မှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တီဗွီနှင့်ရေဒီယိုတို့မှ ကြော်ငြာခြင်း၊ အခြားနည်းလမ်းများဖြင့် ကြော်ငြာ ခြင်း စသည့် မည်သည့်ရည်ရွက်ချက်အတွက်မဆို အသုံးပြုရန်၊ ကူးယူရန်၊ အများပြည်သူအား ဖျော်ဖြေရန်၊ ပြသရန်၊ ပုံစံသစ်ပြုလုပ်ရန်၊ ကောက်နုတ်ရန် (အားလုံးကိုဖြစ်စေ၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဖြစ်စေ) နှင့် ၎င်း အသုံးပြုသူ၏အကြောင်းအရာ ကို အခြေခံ၍ ဆင့်ပွား အကြောင်းအရာများဖန်တီးခြင်း၊ အခြားအကြောင်းအရာ များနှင့် ပေါင်းစည်းခြင်း၊ အထက်ပါပြုလုပ်ခြင်းများအတွက် ထပ်ဆင့်လိုင်စင်ချပေးခြင်းတို့အား ပြန်လည် မရုတ်သိမ်း နိုင်သော၊ ရာသက်ပန်၊ ဥာဏပစ္စည်းများအား အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သော၊ လွှဲပြောင်းနိုင်သော၊ နိုင်ငံတကာ လိုင်စင် (ထပ်ဆင့်လိုင်စင်ချပေးနိုင်သော အခွင့်အရေးနှင့်အတူ) အလိုအလျောက် အသုံးပြုခွင့် ပေးပါသည်။
၃.၆. MPT ၏ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု
အသုံးပြုသူသည် အထွေထွေစည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် ဤသီးခြားစည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်းများ၏ ရလဒ်အဖြစ်၊ တရားရုံး အမိန့်များ သို့မဟုတ် (အမှန်တကယ် သို့မဟုတ် ကြိုတင်မျှော်မှန်းခဲ့သည့်) တရားစွဲဆိုခြင်းများကို တုန့်ပြန်ရန် MPT က သင့်လျော်သော အရေးယူမှုနှင့် သင့်လျော်သော အစီအမံများ ပြုလုပ်လိမ့်ဟု သိရှိနားလည်ပါသည်။
အသုံးပြုသူသည် ၎င်း၏ Facebook သို့မဟုတ် Google အကောင့်နှင့် ဝင်ရောက်၍ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုသူသည် အခြားသူများအသုံးမပြုရသေးသော နာမည်ပြောင်တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး၊ မိမိ၏ အကောင့်တွင် မိမိ၏ ရေးသားဖော်ပြချက်များ၊ အများပြည်သူသိရှိစေရန် ဖော်ပြချက်များ၊ လွှင့်တင်ခြင်း များကို ပြုလုပ်၍ ပြသခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် မော်ကွန်းတင်ထားခြင်း ပြုနိုင်ပါသည်။
၄။ အခွင့်အရေးများ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ခွင့်
MPT သည် အသုံးပြုသူအား အတိအလင်းခွင့်ပြုထားခြင်းမဟုတ်သော အခွင့်အရေးများအားလုံး ကို လက်ဝယ် ထားရှိပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၅.၁. အကယ်၍ မည်သည့်အခါမဆို ဤသီးခြားစည်းမျဉ်းများ သို့မဟုတ် ယင်းနှင့်ဆက်နွယ်သော စာရွက် စာတမ်းများသည် မည်သည့် အကြောင်းကြောင့်မဆို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများအရ တရားမဝင်ခြင်း၊ ဥပဒေအရ မတည်မြဲခြင်း၊ သို့မဟုတ် အတင်းအကြပ် လိုက်နာစေခြင်း မပြုနိုင်သည့်အခါ ကျန်ရှိသော ပြဌာန်းချက်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ တရားဝင်မှု၊ ဥပဒေအရ ခိုင်မာမှု သို့မဟုတ် အတင်းအကြပ် လိုက်နာစေခြင်းကို မည်သည့် နည်းဖြင့် မဆို အကျိုးသက်ရောက်စေရမည် သို့မဟုတ် ယုတ်လျော့ခြင်းမရှိစေရ။
၅.၂. အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ဤသီးခြားစည်းမျဉ်းများသည် ယခင်က ကြိုတင်သတ်မှတ်ထား သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားလုံးကို အစားထိုးပယ်ဖျက်ပြီး ဤစာချုပ်တွင်ပါရှိသော အကြောင်းအရာ များနှင့် ပတ်သက်၍ MPT နှင့် အသုံးပြုသူအကြား တစ်ခုတည်းသော သဘောတူညီချက်ဖြစ်ရမည်။ ဤသီးခြား စည်းမျဉ်းများနှင့် ယခင်သဘောတူညီချက်များ မကိုက်ညီပါက ဤသီးခြားစည်းမျဉ်းများကသာ လွှမ်းမိုးရမည်။
၅.၃. MPT ဘက်မှ အထွေထွေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သို့မဟုတ် ဤသီးခြားစည်းမျဉ်းများအရ မည်သည့် အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ကုစားခွင့်တစ်ခုခုကို ကျင့်သုံးရန်ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကျင့်သုံးရန် နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာခြင်းဖြစ်ပါက အဆိုပါ အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ကုစားခွင့်တစ်ခုခုကို ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲ စွန့်လွှတ် သည်ဟု မှတ်ယူခြင်းမပြုရ။ MPT ဘက်မှ မည်သည့် အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ကုစားခွင့်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကျင့်သုံးရန်ပျက်ကွက်ခြင်းကို နောက်ထပ် သို့မဟုတ် အခြားနည်းကျင့်သုံးခြင်း သို့မဟုတ် အခြား အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ကုစားခွင့်တစ်ခုခုဖြင့် ကျင့်သုံးခြင်းအား တားမြစ်ခြင်း မရှိစေရ။ ဤသီးခြားစည်းမျဉ်း များတွင် ပြဌာန်းထားသော အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ကုစားခွင့်များသည် တစ်စုတစ်စည်း တည်းဖြစ်ပြီး၊ ဥပဒေ အရ ပြဌာန်းထားသော မည်သည့် အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် ကုစားခွင့်များကိုမျှ တားဆီး ပိတ်ပင်ခြင်းမပြုရ။
၅.၄. အသုံးပြုသူသည် MPT ၏ စာဖြင့်ရေးသားထားသော ကြိုတင်သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ ဤသီးခြား စည်းမျဉ်းများအရ ၎င်းရရှိနိုင်သော မည်သည့် အခွင့်အရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့် သို့မဟုတ် တာဝန်ရှိမှုကိုမျှ လွှဲအပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုရ။
၅.၅. အသုံးပြုသူသည် ဤသီးခြားစည်းမျဉ်းများကို MPT၏ညွှန်ကြားမှုအရ အခါ အားလျော်စွာ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းလဲခြင်းကို အသိအမှတ်ပြု သဘောတူရပါမည်။
ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းနှင့် အကျိုးသက်ရောက်သည့်နေ့စွဲ - [နေ့စွဲ]